Sekoly azo antoka |
Hanova ny sakafo
Tantaran'i Dr Quentin Van Meter
Miresaka momba ny ideolojian'ny lahy sy ny vavy ny ray aman-dreny
Transgender Regret Videos By Detransitioners
Dianne Colbert Video Miorina amin'ny fampianarana azo antoka
Miresaka momba ny Transgender ny toro-hevitra ny dokotera, transgenders Ex ary mpanolotsaina sosialy
Profesora John Whitehall, horonan-tsarimihetsika 12 misy ao amin'ny Gender Dysphoria ho an'ny fahazazana
RESAKA REHETRA REHETRA
Lahatsoratra matihanina momba ny olan'ny Transgender
Ny lahatsoratra Profesora John Whithall momba ny Profesora momba ny Gender Dysphoria
Walt Heyer - Transgender nenina
PROGRAMA SEKOLY AZY
REHETRA REHETRA REHETRA REHETRA
Sekoly Sekoly Mampianatra Fitaovana
Resaka ray aman-dreny miresaka momba ny programa momba ny filoham-pirenena azo antoka
Fampahalalana momba ny antony
Momba anay - ny tanjontsika
Tohizo ny fampahalalana azoko
Ray aman-dreny - Zontsika.
LAHATSARY video any amin'ny sekoly voafetra
Politika Fiarovana fiainan'olona. Fepetra sy fepetra
Fandavana & copyright
Sekoly azo antoka LGBT Manome hevitra amin'ny sekoly
Tany Aostralia, ny ideolojia LGBT nampianarina ireo ankizy tany am-pianarana dia natolotra tamina programa iray antsoina hoe Safe Schools. Raha tsy eken'ny ray aman-dreny ny fandaharana ny anarana sy ny endrika aseho azy dia niova imbetsaka ary mbola manohy manao izany. Fikambanana maro samihafa no namoaka programa fanampiny izay ampiasain'ny mpampianatra amin'ireto kilasy lahy sy vavy ireto.
Na dia voalaza aza fa tsy terena ny programa Safe School, ny foto-kevitra momba ny fampidiran-drazana amin'ny lahy sy ny vavy dia ampidirina ao anatin'ny fandaharan'asa fanabeazana ara-pananahana izay terena. Izahay dia nametraka ireo fitaovana avy amin'ireto programa ireto eto amin'ity tranonkala ity ho fampahalalana anao.
Fampianaran'ny fampianarana azo antoka.
Fitaovana azo ampianarina ny sekolin-tsaina azo antoka.
Fifandraisana marina sy fanajana. Fitaovana fampianarana ny miralenta.
Fampianarana azo antoka momba ny fampirantiana ny lahy na ny vavy amin'ny alàlan'ny Family Planning Victoria.
Mitrandraka am-boalohany & manararaotra fitaovam-pampianarana any aoriana.
Fampitana sary manintona tsy mendrika dia ampiasaina hampianarana ny mpianatra.
Ahoana ny fomba Sext amin'ny namanao.
Ny fototry ny fisorohana ny VIH amin'ny lehilahy pelaka.
Fahalalahana hahafantarana vaovao - Fandaharam-pianarana azo antoka any Victoria Australia.
CAUSE dia nandefa FOI hizaha ny atin'ny programa The "Safe Schools" izay ampianarina ny mpianatra. Izany no valiny.
Fampianarana ho an'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny.
Kitapo PC Binary.
Kitapo loharanom-pahalalana ho an'ny mpampianatra.
Ny olona dia miresaka momba ny fandaharam-pianarana azo antoka.
Ny sekoly tsy miankina dia tsy mikasika ny fanararaotana ny fandaharam-pamoretana ataon'ireo ankizy mpikarakara Marxist Roz Ward
Tantara manaitra momba ny firaisana ara-nofo ao amin'ny sekoly Aussie
Politicalpostingmumma manao resaka "Sekoly voafetra"
FAHATONGAVAN'NY FIANGONANA IN YR8!?! - Mark Latham
Ny fomba fijerin'ny raim-pianakaviana amin'ny olana amin'ny antsoina hoe 'Sekoly Safe'
Mitombo ny adihevitra momba ny sekoly ambaratonga fototra raha maro ny ray aman-dreny mandà ny fandaharana
Ny tantaran'i Steve
Ny firaisana ara-nofo ataon'ny ankizy any Aostralia - Manao ny maso any Etazonia "mandoka"
Mark Latham: Ny fanisàm-bahoaka dia mampiseho ny fandaharan'asan'ny Sekolin'ny Sekoly
Fifandraisana mahafa-po - 'Sekoly Safe' 2.0?
Teny ho an'ny Antenimiera ao amin'ny fandaharan'asan'ny fiaraha-miasan'ny sekoly voafidy - Cori Bernadi
Inona no atao hoe "fiarovana"? MP George George
Wendy Francis - Inona no ao an-tsekoly?
Fitsaboana fiovam-po: olona tena nisy, tantara marina
Fihetseham-po amin'ny faniriana hanao firaisana
"Manao ahoana ny fiarovana" ny Sekoly azo antoka?
Mangataka ny fanadihadian'ny parlemantera ho ao Transgenderism: Profesora John Whitehall.
Copyright © 2020 | Ampandehanin'i Tema WordPress Astra
Mampiasa cookies ity tranonkala ity mba hanatsarana ny traikefanao. Isika dia mihevitra fa mahavita azy ianao, saingy afaka misafidy raha tianao. Kitendry CookieMANAIKY
Mampiasa mofomamy hanatsarana ny traikefa anananao ity tranokala ity raha mandeha amin'ny alàlan'ny tranokala ianao. Amin'ireto cookies ireto, ny mofomamy izay voasokajy ilaina dia voatahiry ao amin'ny navigateur fa ilaina tokoa izy ireo amin'ny asa asan'ny tranokala fototra. Mampiasa mofomamy fahatelo an'ny antoko izay manampy anay hamakafaka sy hahatakatra ny fomba fampiasana ity tranonkala ity ianao. Ireo mofomamy ireo dia voatahiry ao amin'ny browser-nao afa-tsy ny fanekenao. Manana safidy ihany koa ianao hisafidy ireo mofomamy ireo. Saingy ny fisafidianana ny sasany amin'ireo mofomamy ireo dia mety hisy fiantraikany amin'ny traikefa anaovanao.